Ny tranonkala, ny router, ary ny solosaina finday rehetra dia manana ny adiresy IP 192.168.8.10. Izay no ahafantaran'ny tenany manokana ny Internet amin'ny Internet na amin'ny tambajotra. Matetika, ny router dia manendry iray amin'ny Laptop amin'ny tambajotra eo an-toerana. Ahoana no ahazoany antoka fa ny adiresy IP amin'ny PC eo an-toerana dia tsy mitovy amin'ny Internet? Ho an'ny fampiasana manokana dia misy firaketana isa izay misaraka (orinasa, toeram-piasana, monina an-trano, sns.). Tsy ampiasaina amin'ny tranokalan'ny fiaraha-monina ireo.
IP Address 192.168.8.10 dia adiresy IP manokana. Ny adiresy IP tsy miankina ao anatiny dia ampiasaina ho tambajotram-pifandraisana LAN eo an-toerana (LAN) ary tsy aseho amin'ny Internet. Ny adiresy IP tsy miankina dia hazavaina amin'ny RFC (IPv6) 4193 na RFC (IPv4) 1918.
192.168.8.10 dia IP natokana ho an'ny console console ho an'ny router. Ity ary koa ny IP isan-karazany ohatra 192.168.8.200, 192.168.8.1, 192.168.0.35, sns dia fomban'ny iraisampirenena eken'ny rehetra ho an'ny router IP. Amin'ny fanamarihana dia mitondra ny lohateny hoe "Default IP Gateway". Tsy mitovy ny mpandeha tsirairay. Ankoatr'izay, misy safidy hafa eo amin'ny maodely marobe toy ny orinasa. Ireo orinasa ireo ho fidirana IP dia mampiasa 192.168.8.10.
Adiresy 192.168.8.10 IP amin'ny filaharana 192.168.8.1 hatramin'ny 192.168.8.255. Ity mizana adiresy ampiasaina amin'ny tambajotra eo an-toerana ity dia hizara ho an'ny fitaovana rehetra (solosaina finday, pad aho, solosaina an-trano, finday, sns.) Amin'ny alàlan'ny tambajotran-trano.
The https://192.168.8.10 Ny adiresy IP dia ampiarahin'ny Internet Apportioned Number Authority ho toy ny ampahan'ny tambajotra voafetra 192.168.8.0/24. Ny adiresy IP amin'ny habaka tokana dia tsy eken'ny fikambanana vitsivitsy & afaka mampiasa ny adiresy IP ny olona raha tsy avelan'ny birao fisoratana anarana amin'ny Internet araka ny anarany RFC 1918, tsy toy ny adiresy IP zaraina.
IP 192.168.8.1 mandra-pahatongan'ny 192.168.8.255 na aiza na aiza ny IP 192.168.8.10 dia ampahan'ny IP tsy miankina iray miantoka ny fenitra efa napetraka miaraka amin'ny RFC 1918. Ireo adiresy ohatra 192.168.8.10 dia tsy ekena amin'ny Internet zaraina. Raha toa ka mila rohy amin'ny alàlan'ny Internet ny tambajotra tsy miankina dia tokony hampiasaina ho toy ny fidirana na mpizara solo.
Fa maninona no toy ny 192.168.8.10 ny adiresy mahazatra?
Araka ny voalaza, ny adiresy IP 192.168.8.10 dia ampahan'ny tambajotran-tsokajy C manokana. Ny filahatr'ireo tambajotra toy izany dia 192.168.0.0 hatramin'ny 192.168.255.255. Izany dia mahatonga adiresy IP vitsivitsy azo atao vitsivitsy 65,535. Ity fanitarana ity dia mazàna ampiasaina amin'ny tamba-jotra tsy miankina satria ny router isan-karazany dia kasain'ny 192.168.1.1, 192.168.8.1, na 192.168.0.1, toy ny adiresy default.
Raha mampifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny telefaona, na solosaina finday, takelaka dia mahazo adiresy IP ohatra ianao 192.168.8.10 amin'ity toe-javatra ity.
Fanombanana ny router
Ny router rehetra dia azo aleha amin'ny browser. Record https://192.168.8.10 ao amin'ny browser raha toa ka 192.168.8.10 ny router an'ny adiresy IP. Ho hitanao ny pejy fandraisana. Ny PW sy anarana be mpampiasa matetika dia: "1234" admin na "nil". Azafady mba alao antoka fa noho ny firaketana ny router.
Raha ny 192.168.8.10 dia tsy ny router IP, azonao atao ny mamerina ny router IP amin'ny alàlan'ny baiko Ipconfig. Raha alaina ny pejin-tranonkalanao admin dia azonao atao ny mampiasa ny pejy fandraisan'anjaran'ny admin amin'ny alàlan'ny fandefasana an-tsaha ny adiresy ao amin'ny tranokala ary azonao atao ny manamarina ny passkey login.
Sokajy IP adiresy Post Fikarohana